တာချီလိတ်သို့ လာအိုနိုင်ငံမှ တရားမဝင် ဝင်လာပြီး ရန်ကုန်တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည့် အနောက်အာဖရိက နိုင်ငံသားအား အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေ | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တာချီလိတ်သို့ လာအိုနိုင်ငံမှ တရားမဝင် ဝင်လာပြီး ရန်ကုန်တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည့် အနောက်အာဖရိက နိုင်ငံသားအား အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေ
Writen by Cherry Htike 12:32:00 PM -0Comments
တာချီလိတ်သို့ လာအိုနိုင်ငံမှ တရားမဝင် ဝင်လာပြီး ရန်ကုန်တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသားအား အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေ
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့သို့ လာအိုနိုင်ငံမှနေ၍ တရားမဝင်လမ်းကြောင်းဖြင့် ဝင်ရောက်လာပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အတုနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့ရုံးတွင် လာရောက် လျှောက်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးအား အောက်တိုဘာလ (၁၉)ရက်နေ့တွင် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံသားကို GUINEENSE ဟုဖေါ်ပြထားသည့် Zheng Zuchao သည် လာအိုနိုင်ငံမှနေ၍ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့သို့ တရားမဝင်လမ်းကြောင်းမှ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး PP No. 2082 ဖြင့် တာချီလိတ်လေဆိပ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းသည် စက်တင်ဘာလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ဗဟန်းမြို့နယ် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးအဖွဲ့ရုံး (ရန်ကုန်)သို့ ကျိုင်းကျူးကျော်အမည်ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်၊ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်းအတုတို့ဖြင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လာရောက်လျှောက်ထားစဉ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းအား စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းတွင် (ပ)၄၁၉/၂၀၁၇ လဝကအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃(၁)/၁၃(၅) ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ဗဟန်းမြို့နယ်ဥပဒေရုံး၏ အကြံပြုချက်အရ ဗဟန်းမြို့မ ရဲစခန်းတွင် (ပ)၄၅၅/၂၀၁၇ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၂၀/၄၆၈(လိမ်လည်မှု/အတု ပြုလုပ်မှု) ဖြင့်အမှုဖွင့် စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တာခြီလိတျသို့ လာအိုနိုငျငံမှ တရားမဝငျ ဝငျလာပွီး ရနျကုနျတှငျ နိုငျငံကူးလကျမှတျလြှောကျထားသညျ့ နိုငျငံခွားသားအား အမှုဖှငျ့စဈဆေးနေ
ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျး) တာခြီလိတျမွို့သို့ လာအိုနိုငျငံမှနေ၍ တရားမဝငျလမျးကွောငျးဖွငျ့ ဝငျရောကျလာပွီး နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျအတုနှငျ့အတူ ရနျကုနျမွို့ နိုငျငံကူးလကျမှတျထုတျပေးရေးအဖှဲ့ရုံးတှငျ လာရောကျ လြှောကျထားသညျ့ နိုငျငံခွားသားတဈဦးအား အောကျတိုဘာလ (၁၉)ရကျနတှေ့ငျ အမှုဖှငျ့စဈဆေးနကွေောငျး သိရသညျ။
နျိုငျငံသားကိုGUINEENSE ဟုဖျေါပွထားသညျ့ Zheng Zuchao သညျ လာအိုနိုငျငံမှနေ၍ စကျတငျဘာလ (၂၄)ရကျနတှေ့ငျ ရှမျးပွညျနယျအရှပေို့ငျး တာခြီလိတျမွို့သို့ တရားမဝငျလမျးကွောငျးမှ ဝငျရောကျလာခဲ့ပွီး PP No. 2082 ဖွငျ့ တာခြီလိတျလဆေိပျမှ ရနျကုနျမွို့သို့ ဝငျရောကျလာခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
၎င်းငျးသညျ စကျတငျဘာလ (၂၅) ရကျနတှေ့ငျ ဗဟနျးမွို့နယျ မွနျမာနိုငျငံကူးလကျမှတျ ထုတျပေးရေးအဖှဲ့ရုံး (ရနျကုနျ)သို့ ကြိုငျးကြူးကြျောအမညျဖွငျ့ နိုငျငံသားစိစဈရေးကဒျ၊ အိမျထောငျစု လူဦးရစောရငျးအတုတို့ဖွငျ့ နိုငျငံကူးလကျမှတျ လာရောကျလြှောကျထားစဉျ ဖမျးဆီးခံခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
၎င်းငျးအား စကျတငျဘာလ (၂၆) ရကျနတှေ့ငျ ဗဟနျးမွို့မရဲစခနျးတှငျ (ပ)၄၁၉/၂၀၁၇ လဝကအကျဥပဒပေုဒျမ ၁၃(၁)/၁၃(၅) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့စဈဆေးခဲ့ပွီးနောကျ အောကျတိုဘာလ (၁၉) ရကျနတှေ့ငျ ဗဟနျးမွို့နယျဥပဒရေုံး၏ အကွံပွုခကျြအရ ဗဟနျးမွို့မ ရဲစခနျးတှငျ (ပ)၄၅၅/၂၀၁၇ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၄၂၀/၄၆၈(လိမျလညျမှု/အတု ပွုလုပျမှု) ဖွငျ့အမှုဖှငျ့ စဈဆေးနခွေငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။